Usizi lwe-Kaizer Chiefs alupheli | Scrolla Izindaba
Usizi lwe-Kaizer Chiefs alupheli
I-KAIZER Chiefs izodinga isimangaliso kule sizini ukuze ize iqede ku-top eight ku-DSTV Premiership.
NgoLwesibili ebusuku i-Swallows ihlikihle usawoti emanxebeni aMakhosi ngenkathi iwashaya ngegoli elilodwa eqandeni e-Soweto derby enkundleni yezemidlalo i-Dobsonville emdlalweni lapho kuthuleke khona isikhashana ukuhlonipa umufi uAnele Ngcongca.
Igoli likaJoseph Mhlongo ngomzuzu wama-86 lenze kwaba kubi kakhulu ku-Chiefs ekuqaleni kwesizini yowezi-2020/21. Lo mdlalo bewuhlelelwe lo Mgqibelo ozayo kodwa wase usondezwa ngenxa yokuzibophezela kwe-Chiefs ku-Caf Champions League kule mpelasonto ezayo.
NgoLwesine iChiefs izoya e-Cameroon lapho izobhekana khona ne-PWD Bamenda emlenzeni wokuqala womzuliswano wokuqala. I-Bamenda ingompetha base-Cameroon kanti Amakhosi abegijima ku-Absa Premiership ngesizini edlule.
I-Chiefs izodinga yonke inhlanhla engayithola e-Cameroon ukuze ibuye nomphumela omuhle womlenze wesibili ngesonto elizayo. Ukuhlulwa kwayo i-Swallows akusikhona obekulindelwe u-Gavin Hunt nabafana bakhe.
Umphumela ubeke umqeqeshi nabadlali bakhe kwingcindezi enkulu. Bekungokwesibili i-Chiefs ihlulwa kule sizini. Owokuqala ubusezandleni zompetha beligi bamanje i-Mamelodi Sundowns emdlalweni wokuvula.
I-Chiefs izohlala endaweni yesishiyagalolunye ngemuva kwemidlalo emihlanu ngamaphuzu amahlanu. Kodwa bangazithola besesimeni esiphansi kakhulu ngemuva kwemiphumela yale mpelasonto ezayo.
Ngakolunye uhlangothi i-Swallows izozizwa sengathi ikwazile ukuziphindiselela. Yahlulwa yi-Chiefs ngamagoli amathathu kwelilodwa ngenkathi lamaqembu amabili egcina ukuhlangana kwiligi eminyakeni emihlanu edlule. Ukunqoba kwabo namuhla kusiyise esicongweni samanje.
Esendaweni yesibili i-Sundowns ingabuyela esicongweni uma inganqoba ekhaya ibhekene ne-Stellenbosch ngoMgqibelo.
Umqeqeshi weSwallows uBrandon Trutter ulishayele ihlombe iqembu lakhe ngemuva komdlalo.
“Bheka, esiwombeni sokuqala besihluleka futhi besingakwazi ukungena ekuzivikeleni kwabo. Kodwa esiwombeni sesibili besiyiqembu elingcono futhi besingaphezu kwabo. Udumo luya kubo bonke abadlali ngobuqhawe babo,” kusho uTrutter.
Umdlalo wakusasa: i-Bloemfontein Celtic ne-Black Leopards (enkundleni yezemidlalo i-Dr Petrus Molemela ngo-7.30 ntambama).